DLULA I-Eurofighter Typhoon AlphaSim FSX & P3D - Rikoooo
Play 47 856
QAPHELA: I-FS2004 HUD ne-RADAR ayihambelani FSX ngakho-ke akafakiwe. Izilungiselelo zephaneli.cfg zisekhona ngakho-ke enye indlela kungenzeka inamathiselwe.
I Eurofighter Isishingishane kuyinto twin-engine, canard-delta wing, fighter multirole.   isishingishane kwadalwa umfelandawonye wezinkampani ezintathu, Eads, Alenia Aeronautica futhi BAE Systems, ngokusebenzisa inkampani ebambe, Eurofighter GmbH , eyasungulwa ngo 1986. Le phrojekthi iphethwe yi-NATO Eurofighter futhi Tornado Management Agency, okuyinto ethatha njengoba ikhasimende prime.  Eurofighter Typhoon wenziwa kukhiqizwa serially by Eads, Alenia Aeronautica, futhi BAE Consortium. Indiza wenziwa sithenge ngaphansi kwezinkontileka ahlukene, ogama lakhe tranches, ngamunye ngoba indiza amakhono ngokuvamile improved. I Isishingishane uye wangenela inkonzo ne Austrian Air Force, Italian Air Force, German Air Force, i-British Royal Air Force, abaseSpain Air Force, kanti Royal Saudi Air Force. (Wikipedia)
Speedbrake - sebenzisa / ukhiye, noma chofoza inkinobho panel.
Hudula Chute - isebenzisa isici esithi 'reverse thrust' FSX/P3D, ngakho-ke cindezela ubambe ukhiye we-F2, ukhiye we-F1 we-canel.
Enezinto - the iSiphepho real has enezinto zayo zilawulwe computer ngakho azikho enezinto iziyisikhombisa noma Izikali on the panel. I model AlphaSim iveza lo, kodwa enezinto ingasetshenziswa by the ukucindezela izinkinobho evamile. Kunezinhlobo ezintathu kuphela enezinto tikhundla - up ngokugcwele kwaphakathi-ndlela futhi phansi ngokugcwele.
Pilot Visors - ephansi ngokuzenzakalelayo emini
Ifake uphethiloli Ucwaningo - lokhu isebenzisa umyalo 2nd Phuma. Sebenzisa ukucindezela izinkinobho ezilandelayo (noma kabusha kwenye into (Kunconywa) e izabelo ikhibhodi) -
Cindezela bese ubamba ikhi shift, thinta ikhi E once
Uyekele ukhiye shift (ebalulekile) thinta ikhi 2 ngokushesha (ngaphakathi 2 imizuzwana ngokucindezela ikhi E).
Ama-switch switch we-VC - konke ukushintshwa ku-vc kuyaphawuleka futhi ezimweni eziningi kunencazelo yangempela yombhalo etholakala kuNkanyamba. Lokhu kushintshwa akusebenzi futhi kusebenza kuphela. Okunye ukushintshwa kwe-VC kufanele FSX imisebenzi, lezi zi-gear lever kanye ne-landing light switch on the left-side console, kanye ne-nav & panet switch switch, i-fuel cutoff (injini shutdown) switch ne-2 switch switchter on the right-side console.
Cima usebenzisa VC sekuqalile - Cima is kube ngokuchofoza Fuel cutoff switch on the console kwesokudla-side in the VC, inkinobho has a unogada esibomvu esingenasici limelwe laphakanyiswa kuqala. Inkinobho KUFANELE wabuyela ON isikhundla once injini spooling phansi, kungenjalo uqale kabusha ngeke kwenzeke.
Iqalisa usebenzisa VC sekuqalile - Umsebenzisi ongaqala noma ngokucindezela inkinobho autostart ngakwesokunxele iphaneli engenhla, noma ukushintshwa ezimbili ukuziqalela ingasetshenziswa console kwesokudla-side in the VC. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, a) shutoff uphethiloli kumele kube sesimweni ON njengoba kuchaziwe ngenhla, futhi b) ukuziqalela ukushintshwa kukhona ngempumelelo 'entwasahlobo-Fithizela', umsebenzisi has chofoza bese ubamba igundane phezu kwabo kuze kube izinhlanzi injini , lokhu ngokwejwayelekile kuthatha isikhathi esingamasonto mayelana 6 imizuzwana eliyifa okuqhubekayo, le 'isandla' pointer zizoshintsha kuya 'isibhakela' kanti switch ibanjelwe. Uma umkhulula inkinobho ngaphambi 6 imizuzwana sesiphelile, kuzodingeka ukuba begine inqubo futhi. QAPHELA: The ukushintshwa ukuziqalela ngeke ukuqala izinjini uma ctrl-shift-F1 ukhiye kwakusetshenziswa lokuchitha kusengaphambili. I izinjini kufanele sizovala besebenzisa obomvu ukuvala shaqa izinkinobho console mpintsha uma izinkinobho VC ukuziqalela ezizosetshenziswa. Uma wasebenzisa ctrl-shift-F1, khona-ke ctrl-E kuyodingeka ukuthi ziqalise futhi.
Cockpit engemuva - ungakwazi ukugibela ezingemuva VC ngokucindezela nokubamba ctrl-Faka kuze kube ukunyakaza eyeka. Bese cindezela shift-Enter ukuze ukukhulisa umbono wabo njengoba uzobe ehlezi liphansi kakhulu. Buyela ngoyedwa reselecting isishingishane noma ngokucindezela ctrl-sangemuva ukuze ukuhambisa phambili godu, sekugxilwa-backspace ukuthuthela phansi ukuphakama lesifanele.
Smokesystem: kukhona inkinobho for Ukushintsha the white emoyeni isibonisi intuthu on / off in the top izinkinobho kwesokunxele iqembu.
AI Aircraft Amalebula: kukhona inkinobho for Ukushintsha AI amalebula bezindiza on / off in the top izinkinobho kwesokunxele iqembu. Lena on ngokuzenzakalela uma une it beka ongakhetha yakho display, ngakho sizobonisa umbhalo obomvu inkinobho.
Multiplayer: ezincane Polly ephakeme imodeli FPS ifakiwe inketho ukundiza njengoba * umdlali izindiza * sessions yabadlali abaningi. Akuyona isibonelo AI njengoba enjalo.
Ufune i-CrusaderF8 v1.00 FSX & P3D